हालसम्मकै बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ — Raranews.com
रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/२९ गते
साउन २९ गते । यो वर्ष नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको मात्र तुलना गर्दा ३.२४ प्रतिशत अर्थात् ५१ हजार ७३८ हेक्टर बढीमा धान रोपाइँ भइसकेको छ ।
समयमै पानी परेका कारण मौसमको अनुकूलता र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भएका कारण धान रोपाइँमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भन्नुभयो, “हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा यसपटक धान रोपाइँ भएको छ । समयमै पानी परेको तथा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका कारण गत वर्षभन्दा तीन प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको छ ।”
गत वर्ष कुल क्षेत्रफलको ९४.४३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको थियो । २०७६ मा १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १२ लाख ९५ हजार २८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । २०७५ भन्दा २०७६ मा धान रोपाइँको क्षेत्रफल नै घटेको थियो । २०७५ मा १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफल थियो, त्यो घटेर २०७६ मा १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुग्यो ।
२०७४ सालमा साउन १६ गतेसम्ममा कुल क्षेत्रफलको ७७.०३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । अर्थात् १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ हजार ९५ लाख ८०४ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । “अहिले समयमा धान रोपाइँ सम्पन्न हुनुुका साथै क्षेत्रफलमा समेत वृद्धि भएको छ । त्यसले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने छ,” प्रवक्ता केसीले स्पष्ट पार्नुुभयो । २०६६ देखि चार वर्षसम्म धानको उत्पादनमा ४० लाख मेट्रिक टन तथा २०७० देखि निरन्तर ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ….
आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भारी वर्षाको संभावना